We'e Abba Dula fi hala yeroo amma JAWAR MOHAMED iin barreffame.
Lafee arbaa waliin cabsuuf?
Guyyoota muraasa dabran Abaan Duulaa tattaaffii diinni yakka barattootaafi ummata Oromoorratti hojjatamaa jiru dhoksuufi hawaasa keenyas afaanfajjeessuuf yaalaa jiru adda durummaadhaan geggeessa jira. Miidiyaalee heddurratti dhihaachuuniifi bakkoota falmaan cimaan geggeeffamaa jirutti ergamuun ummata sobuufi sossobuuf yaalaa jira. Mumul’achuun isaa kun shoora inni bara 2010 erga angorraa gombisaniin booda taphachaa tureen wal faallessa. Waggoota afran dabran Abbaa Duulaa boorotti dhoksanii turan. Amma maalif as baasan? Sababa lama qabu;
Akkuma beekamu Abbaan Duulaa gaafa pirazidantii Oromiyaa ture hojiilee gaggaarii hojjateef dhaabaafi ummata keessatti kabajaafi jaalala horachuu danda’ee ture. Wanni angorraa isa dabaniifis kanuma. Amma ammoo kabajaan inni ummata keessatti qabu dhageetti horataaf jedhanii waan yaadaniif meeshaa ololaatti jijjiiraniif gamaa gamana ergaa jiran. Hawwiin isaanii ummanni isaaf kabajaa waan qabuuf olola sobaa kan shira Wayyaanee of keessatti dhokfate kana ummata akka fudhachiisufi.
Sababni lammataa Abbaan Duulaa meeshaa ololaa ta’ee joorsifamaa jiruuf fudhatamaafi dhageettii inni horate doomsuufi. Dhageettiin inni, keessattu qundaalota Oromoo sadarkaa jidduu, keessatti horate Wayyaaneef sodaachisaa ture. Wanni angorraa buufameefis kanauma. Buufameetis akka warra kaanii hidhamuufi biyyaa bahuu wanni hin mudatiniif yoo ofirraa achi qabnee daran diinomine dhageetti qabu kanaan OPDO keessatti diina nutti hora jedhaniiti. Sodaa isaan qaban kanaaf amma furmaata argatan. Yoo Abbaan Duulaa Maastar Pilaanii Oromoon kaabaa-kibbaa, dhiiraa-dubartiin mormu kana baadhatee, dhiiga ilmaan kichuu dhangala’erraa ejjetee olola sobaa oofu, jaalalti ummataa sun yoosuu jibbatti geeddaramti. Abbaan Duulaa takka ummataan jibbamnaan Wayyaaneef sodaachisaa (threat) hin ta’u. Akkuma lafee arbaa waliin cabsan jedhan, Abbaa Duulaas saba isa kabajuun walitti buusanii, isas salphisanii ummatas afaanfajjeessuun diina lama al takkatti dhahuuf yaalaa jiran.
Tooftaa kana Abbaa Duulaa qofarrattii miti kan hordofaa jaran. Namoota akka manneen barnootaatifi godinootarra deeman ergan hedduun isaanii warra Dh. D. U. O keessatti wayyaa qaban jedhamani. Gaafa duulli kun dhume jara kana sareen Oromootu sooqiddaan isaan arraabuuf hin teessu. Kun ammoo Wayyaaneen osoo hidhuufi ajjeesutti hin rakkatiin diina keessaa ( internal threat) laayyotti dhabamsiifte jechuudha.
Tooftaa kana akkamitti dura haa dhaabbannu? Karaa lamaan fashalsuu dandeenya:
Yaada ololaa qondalota Oromootti fe’amee ergamu kana saaxila baasun fudhatama dhabsiisu. Walgahiilee isaan keessatti argamanitti, miidiyaalee gubbattiifi hawaasa keessatti ragaa qabatamaadhaan deeggaramuudhaan wanni isaaan jedhan soba ta’uu ummatatti agarsiisu barbaachisa. Kun akeekni Wayyaaneen ummata keenya olola dharaatin goyyoomsitee biyya isaa saamtuun kana dammaqinaan dura dhaabbachuuf gargaara.
Yeroo olola qondaalota Oromoo kana dura dhaabbannuufi saaxil baafnu, yaada isaan deemaniin qofarratti fuulleffachuun, namummaa, eenyummaafi Oromummaa isanii tuqurraa of qusachuu barbaachisa.Keesattuu olola siyaasaa Oromoo balfe kan nama jibbinu hunda Oromummaa irraa mulquun taasifamu san dhiisuu barbaachisa. Arrabaafi olola qondaalota akka nama tokkootti salphisu, xiqqeessufi maqaa xureeessu irraa of eeguu qabna. Wanni akkasii gara lamaan nu miidha; Gara tokkoon jara kana madeessufi abdii kutachiiuun daranuu diinatti maxxansa. Gara kaaniin akeeka Wayyaanee kan qondaalota hamma tokko dhageettii qaban ummataan jibbamsiisuu san fashalsuuf fayyada.
Dhumarratti qondaalonni kunis dubbi tana hubatanii sodaa diinaatirraa kan ka’een waan dubbataniifi hojjatan keessatti of eeggannoon deemuu qabu. Dubbii Oromoo madeessitu, qaanyessituufi maqaa xuressiturraa of eeguu qaban. Haasayafi tarkaanfii haqa Oromoo diinaaf laatan irraa hamma danda’ameen of qusachuu qabu. Oromoon har’a qondaalota Dh. D. U. O kanaan ka’aa ilmaan keessan facaasaa lubbuu keessan gaaga’aa fincilaa na waliin qabsaa’aa jecha hin jiru. Kan sanii yeroon ni dhufti. Dubbiin sirritti haa bilchaattu. Wanni amma ummanni isaanirraa eegu, arraabaafi harkaan nutti badirraa of eegaadha. Hamman ani hubadhutti ummanni Oromoo ‘ati kaleessa dhaaba siyaasaa kana waliin turte’ jedhee nama hin diinomsu. Wanni Oromoo garaa hin baane garuu hamtuu dubbatamteefi yakka hojjatame. Kanarraa of eegaa. Boru hin jirree hin ta’inaa